Online yokubala, abaqondisi kanye zokubala
Wokubala inthanethi CalcProfi
CalcProfi – khulula yokubala, converters, rates, izingcaphuno exchange, uyaphendula online. Ukuguquka amatafula, ukucabanga, izinga mahhala.
Physics, imithetho eyisisekelo yokubala
Umthetho wesibili motion wokubala Newton
Bala ibutho, mass nokusheshisa by Newtons umthetho wesibili.
Velocity esemkhathini formula wokubala
Bala velocity esemkhathini of iplanethi esimisweni sonozungezilanga, noma umzimba omkhulu ne mass ehlathululwe engaba.
Umthetho Newton sesithathu motion wokubala
Bala mass nokusheshisa bezinto ezimbili ngokusebenzisa newtons umthetho wesithathu.
Amandla kagesi energy isikhathi wokubala
Bala amandla kagesi, amandla kagesi, isikhathi kanye aphila nomunye.
Current, ukumelana, voltage definition wokubala
Bala wamanje, voltage ukumelana engxenyeni wesifunda kagesi.
Ukushesha emincane formula wokubala
Bala ukushesha emincane, velocity emincane kanye nesikhathi motion, by formula ukusheshisa emincane.
Ukushesha Centripetal formula wokubala
Bala ukushesha centripetal, engaba embuthanweni futhi velocity, by the eziyiziyingelezi motion equation formula.
Kwabantu fresh nosawoti amanzi wokubala
Bala kwabantu amanzi ahlanzekile noma usawoti emazingeni usawoti ehlukene kanye okushisa.
Force mzuzu, ukucabanga online.
Ukubalwa force mzuzu (torque mzuzu) by engaba-vector kanye force vector of umzimba esiqinile.
Isivinini Sound emoyeni, ukubala online.
Ukubalwa speed umsindo in the air (km / h, m / s no njll) ngaphansi kwamazinga ahlukahlukene okushisa, online.
Adonsela phansi abangahle energy formula wokubala
Bala amandla abangahle, mass futhi ukuphakama lomzimba.
Bala ingcindezi, volume, lokushisa kanye amavukuzi nakuwo igesi kusukela ekahle umthetho igesi ezothando.
Boyle thetho wokubala
Bala volume kokuqala wokugcina nokucindezeleka igesi umthetho Boyle sika.
Speed, isikhathi, ibanga, ukucabanga online.
Ukubalwa (inthanethi) speed, isikhathi, ibanga kanye nemizana phakathi kwabo.
Escape velocity formula wokubala
Bala Ukuphunyuka velocity of iplanethi esimisweni sonozungezilanga, noma umzimba omkhulu ne mass ehlathululwe engaba.
Molarity okuhlushwa formula wokubala
Bala lokuhlushwa izinyo lomhlathi, mass kwakwakhe, ivolumu kanye formula isisindo isixazululo amakhemikhali.
Kangakanani Sisindvo kwamanye amaplanethi
Kungakanani uzindla kwamanye solar system amaplanethi.
Velocity emincane formula wokubala
Bala velocity emincane, angle liphenduka kanye nesikhathi ngokushintshana, by formula velocity emincane.
Yokubala Mathematic, izibalo, algebra, izibalo zama-engela
Decimal amafraktjhini wokubala
Ukuguqulwa inombolo zamadesimali ingxenyenamba futhi ingxenyenamba to izinombolo zamadesimali
Algebra nkulumo wokubala inthanethi
Bala bese lula algebra izinkulumo, ezifana kwalokho, ukukhupha, ukubuyabuyelela, ukwahlukana, impande square, amaphesenti.
Square Impande wokubala
Bala impande square (2 degree izimpande) noma olukhulu iyiphi inombolo.
Cube impande wokubala
Bala impande cube (3 degree izimpande) noma olukhulu iyiphi inombolo.
Nth impande wokubala
Bala esigcawini, cube futhi impande Nth noma olukhulu iyiphi inombolo.
Ikholomu kwalokho amaphepha okusebenzela
Bala enezela (sum) izinombolo ezimbili, usebenzisa ikholomu kwalokho indlela.
Ikholomu ukukhupha amaphepha okusebenzela
Bala nekususa (umehluko) izinombolo ezimbili, usebenzisa ikholomu ukukhupha indlela.
Ikholomu ukubuyabuyelela amaphepha okusebenzela
Bala landa (umkhiqizo) izinombolo ezimbili, usebenzisa ikholomu ukubuyabuyelela indlela.
Ikholomu division amaphepha okusebenzela
Bala uhlukanisa (quotient) izinombolo ezimbili, usebenzisa ikholomu ukuhlukana indlela.
Inguqulela izinombolo ukuze izigidi, izigidigidi, izigidigidi, izinkulungwane, lakhs kanye crores. Number of amaqanda e iyiphi inombolo.
Thola volume tabobunjwa geometric, ezifana cube, ikhoni, cylinder, indilinga, isivivane, by amafomula ezahlukene.
Cylinder ivolumu formula wokubala
Thola volume of cylinder, by the formula, besebenzisa ukuphakama futhi base engaba cylinder.
Isigaxa ivolumu formula wokubala
Thola volume of Isigaxa, by the formula, besebenzisa ukuphakama futhi base engaba Isigaxa.
Cube ivolumu formula wokubala
Thola umthamo we cube, by the formula, besebenzisa ubude onqenqemeni cube sika.
Sphere ivolumu formula wokubala
Thola volume of indilinga, by the formula, besebenzisa engaba sphere.
Triangular elingunxande pyramid ivolumu wokubala
Thola volume ezahlukene imibhoshongo, ezifana esingunxantathu, aboncamane futhi yiziphi ezinye izinhlobo imibhoshongo, by amafomula ezahlukene.
Area of ​​a, Indilinga endaweni formula wokubala
Thola indawo ethile rhombus, by the formula, besebenzisa engaba noma ububanzi of circle.
Area of ​​a skwele, indawo square formula wokubala
Thola indawo isikwele, by amafomula, besebenzisa ubude square izinhlangothi noma diagonal.
Area of ​​a parallelogram, parallelogram endaweni formula wokubala
Thola indawo ethile parallelogram, by amafomula, besebenzisa ubude ezinhlangothini, ukuphakama, diagonals futhi igebe eliphakathi kwabo.
Area of ​​isikwele, indawo calandze formula wokubala
Thola indawo isikwele, by amafomula, besebenzisa ubude izinhlangothi, ubude diagonal kanye igebe eliphakathi diagonals.
Area of ​​a glossy, indawo rhombus formula wokubala
Thola indawo ethile rhombus, by amafomula, besebenzisa ubude side, ukuphakama, ubude diagonals, incircle noma engaba circumcircle.
Thola indawo ethile trapezoid, by amafomula, besebenzisa ubude besisekelo ezinhlangothini, ukuphakama, midline, ubude diagonal kanye igebe eliphakathi kwabo.
Area of ​​a unxantathu, equilateral isosceles triangle endaweni formula wokubala
Thola endaweni ezahlukene aboncantathu, ezifana equilateral, isosceles, unxantathu kwesokudla noma scalene, by amafomula ezahlukene.
Selilonke of a circle (azungezwe a circle) ifomula wokubala
Thola selilonke (azungezwe) wombuthano, by the formula, usebenzisa engaba umbuthano.
Azungezwe isikwele, azungezwe formula wokubala
Thola azungezwe isikwele, by the formula, besebenzisa ubude calandze izinhlangothi.
Azungezwe we parallelogram, azungezwe formula wokubala
Thola azungezwe parallelogram, by the formula, besebenzisa ubude parallelogram izinhlangothi.
Azungezwe we rhombus, azungezwe formula wokubala
Thola azungezwe rhombus, by the formula, besebenzisa ubude rhombus side.
Azungezwe we trapezoid, azungezwe formula wokubala
Thola azungezwe of trapezoid, by the formula, besebenzisa ubude bazo zonke izinhlangothi trapezoid.
Azungezwe unxantathu, azungezwe formula wokubala
Thola azungezwe ezahlukene aboncantathu, ezifana equilateral, isosceles, kwesokudla noma triangle scalene.
Ibanga phakathi amaphuzu amabili wokubala
Bala ibanga phakathi amaphuzu amabili Ubukhulu ezimbili.
Maphakathi formula wokubala
Bala midpoint of a ingxenye umugqa phakathi kwezindawo ezimbili ku Ubukhulu ezimbili.
Ibanga formula wokubala
Bala ibanga phakathi amaphuzu amabili e Ubukhulu ezimbili, ngokusebenzisa izixhumanisi zabo.
Bala ema-engele, izinhlangothi futhi indawo unxantathu.
Hlanganisa nofana ukhuphe zinsuku nangaleso sikhathi kusukela ngosuku
Engeza isikhathi usuku noma susa isikhathi kusukela osukwini.
Ukungeza nekususa isikhathi
Ukungeza nekususa isikhathi wokubala: ukwengeza noma susa besikhathi ngamalanga, amahora, imizuzu, imizuzwana.
Bala izinsuku nesikhathi phakathi nezinsuku
Bala usuku ubude besikhathi phakathi nezinsuku ezimbili futhi izikhathi 2, eminyakeni, izinyanga, amasonto, zinsuku, amahora, imizuzu, imizuzwana.
Isikhathi ukuguqulwa wokubala, oguqula isikhathi iminyaka, izinsuku, amahora, imizuzu, imizuzwana.
Singakanani isikhathi kuze kube usuku?
Mingaki iminyaka, izinsuku, amahora, imizuzu, namasekhondi ezisele usuku.
Singakanani isikhathi sidlulile kusukela osukwini?
Baye mingaki iminyaka, izinsuku, amahora, imizuzu, imizuzwana solo usuku.
Zingaki izinsuku ngenyanga?
Thola inani eliqondile izinsuku kunoma iyiphi inyanga.
Zingaki izinsuku ngonyaka?
Inani lezinsuku wamanje, olandelayo, odlule noma yimuphi omunye unyaka.
Ukwengezwa, ukususa isikhathi, umehluko phakathi nezinsuku, isikhathi ukuguqulwa: usuku, amahora, imizuzu, imizuzwana.
Zingaki izinsuku kuze entwasahlobo?
An inani eliqondile izinsuku, amahora, imizuzu namasekhondi ezisele kuze komnyaka.
Zingaki izinsuku zonke kuze kube ehlobo?
An inani eliqondile izinsuku, amahora, imizuzu namasekhondi ezisele kuze ehlobo elilandelayo.
Zingaki izinsuku zonke kuze kube ukuna?
An inani eliqondile izinsuku, amahora, imizuzu namasekhondi ezisele kuze ukuwa olandelayo.
Zingaki izinsuku kuze ebusika?
An inani eliqondile izinsuku, amahora, imizuzu namasekhondi ezisele kuze olandelayo ebusika.
Internet, computer, amathuluzi web, iphasiwedi ugesi
My IP. Thola ikheli lakho le-IP
Ungathola ikheli lakho le-IP, yesistimu yokusebenza, umhlinzeki, izwe nomuzi.
Ulwazi mayelana ikheli le-IP
Thola umhlinzeki, izwe nomuzi by ikheli le-IP.
Inombolo yocingo Random generator
Thola uhlu izinombolo zocingo okungahleliwe izingcingo zasendlini kanye nezingcingo omakhalekhukhwini, lanetinombolo letehlukene kwamadijithi ngetakhiwo letehlukene.
Online ibhakhodi generator
Thola ibhakhodi by ikhodi umkhiqizo digital.
Izincwadi Russian lokuhusha
Humusha izincwadi russian izincwadi english futhi english kuya russian.
Hindi ikhibhodi online
Thayipha izinhlamvu hindi on hindi ikhibhodi ebonakalayo.
Thayipha izinhlamvu arabic ku Arabhu ikhibhodi ebonakalayo.
Currency Converter, imali exchange rate, stock market
Amanani wokushintshanisa ngemali yeDijidali ku-inthanethi, ukuguqulwa kunoma iyiphi imali yangempela.
Amashadi womlando wemali yedatha yedatha. Izintengo zemali yedivayisi yeDijidali, umlando wemali ye-digital value
Bitcoin wokubala, Bitcoin Converter
Bitcoin wokubala online, guqula Bitcoin. Intengo ye-Bitcoin namhlanje emakethe yokushintshanisa ngemali yedijithali.
I-Ethereum wokubala, i-Ethereum converter
I-Ethereum wokubala inthanethi, u-Ethereum uguqule. Intengo ye-Ethereum namuhla emakethe yokushintshanisa ngemali yedijithali.
Litecoin wokubala, i-Litecoin converter
Litecoin wokubala online, converter Litecoin. Intengo ye-Litecoin namhlanje emakethe yokushintshanisa ngemali yedijithali.
Usezingeni lemakethe yemali yedijithali: iningi elithembisayo, imali entsha enokwethenjelwa futhi enenzuzo yedijithali manje.
Chemistry, udaba eziphilayo, amagesi, izinto
Health, ukuqina, ekudleni
Lose weight wokubala
Bala inani kilojoule ngosuku udinga ukuqeda kusuka ekudleni kwakho uma ufuna ukunciphisa umzimba.
Bala wena calorie izidingo zansuku zonke uma ufuna ukulahlekelwa isisindo noma balondoloze isisindo sakho.
Postcodes, isimo sezulu, ibanga kanye nesikhathi esishintshashintshayo
An sezulu olunembile kulindeleke noma yisiphi idolobha emhlabeni namuhla, kusasa, izinsuku 3, ngesonto, izinsuku ezingu-10.
Ibanga phakathi imizi wokubala
Ibanga Geographical ngomgwaqo iqonde futhi onguthelawayeka ophakathi kwamadolobha amabili.
Umehluko kwesikhathi ophakathi kwamadolobha
Chaza umehluko isikhathi phakathi kwemizi, isikhathi esishintshashintshayo, umehluko isikhathi phakathi imizi emhlabeni
Postal code othole
Thola nekhodi yeposi by nekheli yingasiphi emhlabeni online.
Auto, izimoto: isondo osayizi, specs lobuchwepheshe
Car Ukucaciswa lobuchwepheshe
Ukucaciswa kobuchwepheshe kwanoma iyiphi ukwakheka imoto futhi oyisibonelo.
Ukukhethwa imoto Ukucaciswa
Ukuze ukhethe imoto inikezwe ezibekiweko lobuchwepheshe.
Wheel and disk emasayizi by ukwakheka imoto futhi oyisibonelo
Factory osayizi amasondo kanye izindilinga eziyizicaba, ongakhetha ukuphindisela, disk offset, imishini nganoma yisiphi ukwakheka kanye nemoto oyisibonelo.
Izinguquko ubukhulu kwangaphandle kwesondo, imvume, umshini wokubonisa izinga lejubane readout, njll namanye isondo phezu ngezimoto.
Ngembathisa osayizi, izicathulo ezinobukhulu, ubukhulu amashadi, ofaka umnqwazo, amabhande, ikhala osayizi
T-shirts osayizi wokubala inthanethi
Iqukethe t-shirts ezinkulu nezincane zamadoda nabesifazane sika osayizi ishadi emazweni ahlukene.
Zangaphansi Men sika ngobukhulu wokubala inthanethi
Inguqulela zamadoda zangaphansi ezinobukhulu kwamanye amazwe, njenge-American, isiJalimane, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiRashiya, Czech, isiSlovak, international, noma okhalweni osayizi.
Jeans nebhulukwe osayizi wokubala inthanethi
Inguqulela amadoda nabesifazane sika jeans nebhulukwe osayizi emazweni ehlukene, njenge-American, British, isiNtaliyane, isiFulentshi, isiRashiya, isi-Japanese, international, noma okhalweni okhalweni osayizi.
Jeans Men sika ngobukhulu wokubala inthanethi
Inguqulela jeans zamadoda osayizi emazweni ehlukene, njenge-American (US / UK), isiNtaliyane, isiFulentshi, isiRashiya, osayizi international, noma okhalweni osayizi ngamasentimitha.
Inguqulela amadoda nabesifazane sika jackets kanye amajazi osayizi emazweni ehlukene, njenge-American, British, European, isiNtaliyane, isiRashiya, isi-Japanese, international, esifubeni ububanzi, noma okhalweni okhalweni osayizi.
Izicathulo zabesilisa Usayizi wokubala inthanethi
Inguqulela zamadoda waphi emasayizi kwamanye amazwe, njenge-European, British, American (USA), ezinobukhulu Japanese noma ngamasentimitha.
Teen sika isicathulo wokubala
Zibonakalise Ukuthi waphi emasayizi ngelokubulala, ukuguqula waphi emasayizi ngelokubulala ukuze ubukhulu emazweni ahlukene.
Girls izicathulo osayizi wokubala inthanethi
Inguqulela amantombazane waphi emasayizi kwamanye amazwe, njenge-European, British, American (USA), ezinobukhulu Japanese noma ngamasentimitha.
Inguqulela baby ezigqokisa ezinobukhulu kwamanye amazwe, njenge-American, British, European, ezinobukhulu Russian, esifubeni nobubanzi nokuphakama kwawo, noma ubudala lengane.
Izikhindi Men sika ngobukhulu yokubala inthanethi
Inguqulela izikhindi zamadoda osayizi kwamanye amazwe, like American (US / UK), isiFulentshi, isiNtaliyane, isiRashiya, osayizi international, noma usayizi okhalweni ngamasentimitha.
Ichaza elithi amagilavu ​​madoda ubungako kanye wokugubha yamazwe ahlukene.
Izesekeli osayizi wokubala inthanethi
Thola bese ukuguqula izesekeli ezahlukene, like izigqoko, amabhande, amasongo, amagilavu ​​osayizi emazweni ahlukene.